Laba Jeer Ayay Real Madrid Aniga Iyo Ronaldinho Na Doonaysay, Waxaanan Ugu Jawaabay........ - Gool24.Net
Laba Jeer Ayay Real Madrid Aniga Iyo Ronaldinho Na Doonaysay, Waxaanan Ugu Jawaabay……..
Kabtankii hore ee kooxda Barcelona ee Carles Puyol ayaa shaaciyay in maamulka kooxda Real Madrid ay laba jeer isku dayeen in ay la saxiixdaan muddadii uu ku dhex jiray kubbada cagta wuxuuna sidoo kale xusay in ay doonayeen Ronaldinho.
Kooxaha uu xifiltanka wayni ka dhexeeyo ee Real Madrid iyo Barcelona ayay adag tahay in ay ciyaartoy la kala wareegaan laakiin Carles Puyol ayaa sheegay in laba jeer uu iska diiday in uu Real Madrid ku biiro.
Carles Puyol ayaa sheegay in xili ciyaareedkii 2001/2002 iyo xili ciyaareedkii 2004/2005 kii ay kooxda Real Madrid ay isku dayeen in uu Bernabeu u wareego balse uu labada jeerba iska diiday wuxuuna sidoo kale xusay in ay isaga iyo Ronaldinho isla doonayeen.
Carles Puyol oo waraysi siiyay TV3 ayaa sheegay in markii Real Madrid loo magacaabay Jose Antonio Camacho in uu doonayay doonayay sidii uu isaga iyo Ronaldinho uu ula wareegi lahaa.
Ugu horayn Carles Puyol oo ka hadlaya isku daygii Madrid ay isaga iyo Ronaldo ku doonaysay ayaa yidhi: “Real Madrid ayaa Jose Antonio Camacho u magacowday ka tababaraha cusub ee kooxdeeda isla markaana waxa uu isagu doonayay Ronaldinho iyo aniga”.
Puyol oo labadii jeer ee ay Madrid isku dayday ee uu iskadiiday ka hadlaya ayaa yidhi: “Iyagu waxay isku dayeen in ay labadaas jeer aniga ila saxiixdaan, laakiin waxaan joogay kooxda aduunka ugu fiican, waxaanan doonayay in aan halkaas koobab ugu guulaysto. Sidaa daraadeed, waan sii joogay”.
Carles Puyol ayaa waqti cajiib ah ku soo qaatay kooxda Barcelona wuxuuna ciyaaraha ka fadhiistay isaga oo ahaa kabtanka Blaugrana wuxuuna muujiyay sida uu daacada ugu ahaa kooxdiisii hore ee Barcelona.